IPhoenix OS enye indlela enhle kakhulu yokuba ne-Android kwikhompyutha yakho | Kusuka kuLinux
IPhoenix OS enye indlela enhle kakhulu yokuba ne-Android kwikhompyutha yakho
I-Android isibe ngesinye sezinhlelo ezisebenza kakhulu emhlabeni wonke, lolu hlelo isetshenziswa kuningi lamadivayisi eselula njengama-Tablets ne-Smartphone futhi inwebise imakethe yayo ukuthi isetshenziswe kuma-Smart TV nakuma-smart watch.
I-Android ekuqaleni yayinokusekelwa okufanele kusetshenziswe kumadivayisi anama-processor we-ARM, kepha Izinguqulo zesikhathi ze-Android zenziwe ezingafakwa kumakhompyutha.
Ngokufika kwalezi zinguqulo zamakhompyutha, onjiniyela abaningi baqala ukudala amasistimu asuselwa ku-Android yamakhompyutha, phakathi Okunye okwaziwa kakhulu kwakuyiphrojekthi ye-Remix OS.
1 Mayelana nePhoenix OS
2 Izici ze-Phoenix OS
3 Izidingo zokufaka iPhoenix OS
4 Landa iPhoenix OS
Mayelana nePhoenix OS
Ngeshwa le projekthi inqanyuliwe, kepha siyabala nenye enye indlela yePhoenix OS, lolu uhlelo olususelwe kuphrojekthi ye-Android-x86.
Umcabango we dala inguqulo ye-Android eseduze neparadigm ne ungazisebenzisa kanjani izinhlelo zokusebenza kwedeskithophu (IWindows, iMac neLinux).
Ukuze wakhe isistimu ephelele yamadivayisi aphakathi kokusetshenziswa kweThebhulethi ne-PC lokhu kuhlanganiswa kwedeskithophu nepulatifomu yeselula, engasetshenziswa ngendlela yamathebulethi, ama-laptops, ama-smart desktops namanye amadivayisi wokubonisa amakhulu.
Ngokufingqa, IPhoenix OS ingasebenza kumadivayisi ane-Intel x86 noma amaprosesa alinganayo. Ingafakwa futhi kwi-hard disk yokusebenza, ngaphandle kokuthinta uhlelo lokuqala.
Kahle izuza njengefa izici eziningi nemisebenzi yezinhlelo zokusebenza zakudala zekhompyutha futhi iyahambisana nezigidi zezinhlelo zokusebenza esingazithola esitolo sohlelo lokusebenza lwe-Android.
Ngokuyinhloko ingasetshenziswa ngokukhululeka kunoma iyiphi indawo enjengekhaya, ihhovisi, imfundo noma enye into.
Ukusetshenziswa kwalolu hlelo kuyindlela enhle yokunikeza impilo entsha kulawo makhompyutha anezinsizakusebenza eziphansi futhi ukwazi ukuwasebenzisa ngohlelo oluthandwa kakhulu.
Ngalokhu, umsebenzisi unokufinyelela kokuhlangenwe nakho kwezinhlelo zokusebenza zakudala ze-PC nokusekelwa kwezigidi zezinhlelo zokusebenza ze-Android okwejwayelekile, okuyivumela ukuthi isetshenziswe ngokukhululeka kunoma iyiphi indawo enjengekhaya, ihhovisi noma indawo yokufunda.
Izici ze-Phoenix OS
I-Phoenix OS inikeza isikhombimsebenzisi esibukeka kahle ujwayele kakhulu kunoma isiphi isistimu yokusebenza. Inezixhumanisi ezisheshayo futhi zinokubuka konke okusheshayo kwezinhlelo zokusebenza ezivulekile lapho ungashintsha khona ngokushesha.
Inokusekelwa kwamawindi amaningiNjengoba uhlelo ngalunye luvula efasiteleni elilungiswa ngokuphelele ngosayizi, futhi eziningi zezinhlelo zokusebenza zingavulwa futhi ziphathwe ngasikhathi sinye.
Ekuqaleni kokuqala IPhoenix OS inokusekelwa kwendabuko kolimi lwesiShayina nesiNgisi, kepha ezinye izilimi zingalungiswa kuzinhlelo zokusebenza, kusuka kumenyu yezilungiselelo.
Izidingo zokufaka iPhoenix OS
Ukuba uhlelo olususelwa kuphrojekthi ye-Android x86, izidingo zokukwazi ukufaka lolu hlelo kukhompyutha yakho zincane kakhulu.
Ikhompyutha yethu kufanele okungenani ibe nayo:
Iprosesa ye-Intel x86 1Ghz core noma ngaphezulu
1 GB we-RAM noma ngaphezulu
Ividiyo engu-128MB noma ngaphezulu
6 GB hard disk noma ngaphezulu
Singakwazi ukufaka lolu hlelo kukhompyutha yethu kanye nezinye izinhlelo zokusebenza ngaphandle kokufaka okunye kokunye esesivele sikufakile, okwenza kube inketho enhle kakhulu.
Singasebenzisa futhi lolu hlelo emshinini obonakalayo uma singafuni ukuyekethisa idatha yethu yekhompyutha noma sifuna ukuhlola uhlelo ngaphambi kokulifaka kukhompyutha yakho.
Landa iPhoenix OS
Okokugcina singathola isithombe salesi simiso ukwazi ukuyifaka kukhompyutha yethu kusuka kuwebhusayithi yayo esemthethweni, kuphela kumele siye kusixhumanisi esilandelayo lapho singalanda khona.
Isixhumanisi se- ukulanda yilokhu.
Ungahamba ngezinkundla lapho ungathola khona izinhlobo ezithile ze-ARM zalolu hlelo kwamanye amadivayisi eselula njengamamodeli wakamuva we-Nexus, noma ngabe ukusekelwa kuyinto yokuqala futhi kungenzeka ukuthi uzohlangabezana nezinkinga ezahlukahlukene.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Android » IPhoenix OS enye indlela enhle kakhulu yokuba ne-Android kwikhompyutha yakho
Esixhumanisweni sokulanda zinikezwa kuphela ngeWindows ne-Mac, kahle kakhulu kuleli khasi «Kusuka ku-Linux» ...
U-Andres Fernandez kusho
Sanibonani, ngilandile lolu hlelo lokusebenza kepha uma ngiqala okokuqala, isikrini simnyama futhi silayisha amachashazi amhlophe. Bengicabanga ukuthi ngemuva kwesikhathi esithile izovula uhlelo kepha ngemuva kwamahora ama-3 ayizange. Noma yisiphi iseluleko? Ikhompyutha yami ine-Asrock N68-S UCC, iprosesa ye-AMD Athlon II, i-3 Gb yememori, kanye ne-hard drive yohlelo kuphela. Ngizamile ukuyifaka kusuka kumawindi 10. Ngithemba ukuthi ungangiqondisa. Siyabonga ngesikhathi sakho.
Phendula u-Andres Fernandez
Kungaba inkinga ngeprosesa ngoba kungenzeka ukuthi indala kakhulu futhi ayemukeli (mhlawumbe) i-sse4.1 noma i-4.2 enye kungenzeka kube yi-bios engahambisani kahle nohlelo
Uhlelo oluhle kakhulu ngivele ngilubeke kumemori futhi ngiluthandile,
URaul C. kusho
Sawubona, nginalesi simisi futhi nginombuzo, ngifakele iWhatsApp kepha angikwazi ukulayisha izithombe kwisimo ngoba iWhatsApp ayiyiboni ikhamera, bengingenza kanjani lapho?
Phendula uRaul C
/ Ungalufaka kanjani ulimi lokuhlela iRust kuLinux?
IWarzone2100 isu lesikhathi sangempela namasu weqhinga